जोनी लिभरकी छोरी भन्छन्- 'मेरो त रगतमै कमेडी छ' | MYAGDINEPAL
Home / अन्तरवार्ता / फाेटाे फिचर / जोनी लिभरकी छोरी भन्छन्- 'मेरो त रगतमै कमेडी छ'
जोनी लिभरकी छोरी भन्छन्- 'मेरो त रगतमै कमेडी छ'
आजभोलि स्ट्यान्डअप कमेडियनमा जेमी जे लिभर चम्केकी छिन्। उनले महिलाका लागि त्यति आकर्षक नमानिने हास्य विधामा आफ्ना पिताको प्रतिष्ठा बढाउने निर्णय गरेकी छिन्। बलिउडका प्रसिद्ध हास्य अभिनेता जोनी लिभरकी छोरी जेमीले थोरै समयमा धेरै लोकप्रियता कमाएकी छिन्। एक भारतीय मिडियाले उनीसँग गरेको कुराकानीः
ठूलो रूखमुनि सानो विरुवा हुर्किन पाउँदैन। कमेडीको विशाल वृक्ष जोनी लिभरको छोरीको अनुभव के छ?
मेरा बुबाले बलिउडमा दह्रो स्थान बनाएका छन्। स्टेजदेखि फिल्मसम्म उनलाई टक्कर दिने कोही छैन। आजभोलि कपिल शर्माले राम्रो गरिरहेका छन्। राजपाल यादव, परेश रावल, राजु श्रीवास्तवले पनि राम्रो काम गर्छन्। तर, मलाई लाग्छ मेरो बुबाभन्दा अगाडि बढ्न सक्नु कसैका लागि पनि गाह्रो काम हो। बुबाजस्तै मलाई पनि दर्शकले माया दिइरहेका छन्। आफूलाई 'प्रुभ' गर्ने चुनौती मेरासामु छ। तर, इन्डस्ट्रीले मलाई स्वीकार गर्यो्, यही नै ठूलो कुरा हो।
जोनी लिभरकी छोरी हुनु तपाईंका लागि वरदान सावित भयो कि अभिशाप?
मेरो बुबाले कहिल्यै कसैसँग मेरो सिफारिस गर्नुभएन। मैले अडिसन दिएर आफ्ना लागि आफैँ काम खोजेकी हुँ। तर, यो कुरा सत्य हो कि जोनी लिभरको छोरी हो भन्ने थाहा पाउनासाथ मान्छेहरूको मप्रतिको व्यवहार अचानक बदलिन्छ। इन्डस्ट्रीमा बुबाको सबैसँग राम्रो सम्बन्ध भएकाले पनि सबैले मलाई माया र आफ्नोपन देखाउँछन्।
केटीहरूका लागि उपयुक्त नमानिने यस क्षेत्रमा आउने प्रेरणा कहाँबाट पाउनुभयो?
मेरो बुबाले आफ्नो कामलाई कहिल्यै पनि घरमा आउन दिनुभएन। उहाँ एउटा सामान्य पिताजस्तै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मप्रति 'प्रोटेक्टिभ' हुनुहुन्छ। मलाई यस क्षेत्रमा लाग्न दिने उहाँको पनि इच्छा थिएन। तर, मेरो प्रतिभा देखेर उहाँले महसुस गर्नुभयो कि यसलाई कसरी रोकूँ। त्यसैले उहाँले मलाई यस क्षेत्रमा लाग्ने स्वीकृति दिनुभयो। कमेडीको प्रतिभा त मेरो रगतमा छ।
केही आफन्त यस्ता पनि त होलान्, जसले सुरुमा तपाईंको निर्णयलाई गलत भने होलान्। अहिले उनीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ?
मैले आफ्नो जीवनमा सुरुवातका धेरैजसो गलत निर्णय नै लिएकी छु। पढ्दा म डाक्टर बन्न चाहन्थेँ। त्यसमा फेल भएपछि म मार्केटिङतिर लागेँ। लन्डनमा दुई वर्षसम्म मार्केटिङका जागिर पनि गरँे। केही मानिसको मुखबाट 'म अभिनयका लागि बनेको हुँ' सुन्दा पहिला त छक्क परेँ। तर, अहिले लाग्छ– यसबाटै म बढी खुशी पाउँछु।
दोहोरो अर्थ लाग्ने संवाद बोल्नु, बांगोटिंगो मुख बनाउनु, नराम्रो इशारा गर्नु। आजभोलिको कमेडी यही हो?
हामीले गर्ने कमेडीमा अभिनय, हाउभाउ, नृत्य र शारीरिक लचकता सबैको महत्व छ। दर्शकको मनोरञ्जनका लागि यदि सफासुग्घर तरिका अपनाइयो भने त्यही राम्रो हो। यस्तो कमेडी जसमा हाम्रा शब्दले कसैको चित्त नदुखोस्। दर्शकलाई हँसाउनका लागि कठोर शब्दको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन।
तपाईं धेरैजसो आशा भोसलेको नक्कल गर्नुहुन्छ। कुन–कुन यस्ता सेलिब्रिटी छन्, जसको नक्कल गर्न सजिलो लाग्छ?
म ट्रेन्ड सिंगर भएकाले मलाई आशाजीको मिमिक्री गर्न मन पर्छ। इला अरुण, हेमा मालिनी र करीना कपुरको मिमिक्री पनि गर्छु। मान्छेले मलाई मेरै बुबाको मिमिक्री गर्न लगाउँछन्।
कमेडीबाहेक तपाईंका अरू सोख के–के हुन्?
म सानो हुँदा नै बुबालाई थाहा भइसकेको थियो कि म सुर र ताल बुझ्छु। त्यसैले स्कुल पढ्दादेखि नै मलाई गायनको प्रशिक्षण दिन थालेका थिए। गीत गाउन, गजल सुन्न मलाई मन पर्छ। मलाई नृत्यको पनि सोख छ।